Nikarakara Fihetsiketsehana Ireo Niharam-boina Tamin’ny Tafio-drivotra Haiyan Tao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2014 8:43 GMT
Fihetsiketsehana ‘People Surge’ tao amin'ny oniversitem-panjakana tao Leyte. Sary avy amin'i Tudla. “People Surge” protest gathering in a public university in Leyte. Photo from Tudla
Jereo ihany koa ny fitantarana manokana nataonay momba ny Tafio-drivotra Haiyaa Nandrava An'i Filipina.
Niharam-boina maherin'ny 10 000 tamin'ny tafio-drivotra Haiyan (Yolanda) no nanatevin-daharana fihetsiketsehana antsoina hoe ‘People Surge’ (ny firohotry ny vahoaka) mba hiampanga ny fitaredretran'ny fahatongavan'ny fanampiana sy ny asa fanavaozana ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Ny ‘People Surge’ dia firaisan'ireo niharam-boina tamin'ny tafio-drivotra Haiyan izay avy ao amin'ny faritanin'i Leyte sy Samar ny ankamaroany.
Namely ny vondro-nosy Visayas tao Filipina tamin'ny 8 Novambra i Haiyan, tafio-drivotra mahery vaika manerantany 2013 izay namono olona maherin'ny 6 000. Filipina an'arivony no tsy manan-kialofana taorian'ilay tafio-drivotra mahery vaika mitovy amin'ny tsunami izay nandrava tanàna marobe tao amin'ny faritra.
Nitaraina momba ny tsy fisian'ny fanampiana avy amin'ny governemanta amin'ny fanamboarana ny trano sy ny fijerena ny fiveloman'ireo niharam-boina tamin'ny tafio-drivotra ireo mpandray anjara tamin'ny “People Surge”. Notoherin'izy ireo ihany koa ny politika “Faritra Tsy Azo Hanorenana” izay nolazain'izy ireo fa mety hitarika famindran-toerana ireo mponina an'arivony ao amin'ny faritra amorontsiraka.
Tao amin'ny oniversitem-panjakana no natao voalohany ny fihetsiketsehana “People Surge” alohan'ny nidinana manodidina ny tanànan'i Tacloban, izay tena voakasiky ny tafio-drivotra Haiyan.
Mpivavaka katolika, mampahafantatra ireo tanjon'ny hetsika. Sary avy amin'i Tudla
Fihetsiketsehana “People Surge” tao Tacloban. Sary avy amin'i Tudla.
Mponina milanja sora-baventy natao an-kamehana milaza ny fanoheran'izy ireo ny politika “Faritra Tsy Azo Hanorenana”. Sary avy amin'i Tudla.
Mponina tanora sy antitra mitaky ny fanafoanana ny politika “Faritra Tsy Azo Hanorenana”. Sary avy amin'i Tudla.
Niharam-boina tamin'ny tafio-drivotra maneho ny ahiahiny manoloana ireo drafi-panavaozana ataon'ny governemanta. Sary avy amin'ny Peope Surge.
Mpandray anjara amin'ny fihetsiketsehana mitaky fanavaozana avy hatrany hoan'ireo tanàna ravan'ny tafio-drivotra fa tsy fandefasana miaramila. Sary avy amin'i Tudla.
Mpanao fihetsiketsehana mampitandrina amin'ny fibodoana tany hoan'ireo orinasa goavana. Sary tao amin'ny Facebook-n'i Elle Freem.
Nampiasa diezy Twitter #PeopleSurge ihany koa ny hetsika. Nihevitra i Angel de Guzman† fa ny ‘People Surge’ no fihetsiketsehana goavana indrindra tao amin'ny faritra tao anatin'izay taona vitsy izay:
Fanentanana goavana indrindra mbola tsy fahitako tao anatin'izay taona vitsy izay. Ary rariny tanteraka raha malahelo ireo nieren-doza tamin'ny Yolanda
Leon Dulce, manam-pahaizana momba ny tontolo iainana, nanazava ny antony mahatonga ireo mponina manohitra ny politikan'ny «No Build Zone (Faritra Tsy Hanorenana)»:
Manampy trotraka ny anjara ratsin'ny sisa velona ny politikan'ny “faritra tsy azo hanorenana” izay napetraky ny governemanta tao amin'ireo faritra morontsiraka rava, izay noheverina fa hanalavirana ireo tanàna tsy ho tratry ny loza ateraky ny onjan'ny tafio-drivotra, saingy kosa nampisaraka ireo vahoaka mpanjono sy ireo fiarahamonina morontsiraka amin'ny fialofana sy ny fiainana andavanandro ao anatin'izany.
Amando Doronila, mpanao gazety menavazana, nampitandrina ny governemanta mba tsy hanohintohina ny fahatezeran'ireo niharam-boina mampalahelo:
Rehefa avy niharitra tsy fahazoan-tsakafo, fialokalofana sy fanafody nandritra ny roa volana mahery, ny mponina maherin'ny 12 000 tao Leyte sy Samar no nitanjozotra nankao Tacloban rava mba haneho ny hatezerany manoloana ny tsy fihetsehan'ny governemantam-pirenena miala aina, raha mbola mikaroka sy maka ireo faty potipotika ao anaty korontan-trano rava ireo mpiasa mpamojy voina ka mahita faty eo ho eo amin'ny telo isan'andro eo, mba hahafahan'ireo havan'ny maty mandevina am-pamendrehana ireo sisan-taolam-paty. Araka ny fomba amam-panaon'ny Filipino, tsy misy zavatra mametaveta sy maniratsira kokoa afa-tsy ny mamela ireo maty tsy hilevina, indrindra raha kinanga ataon'ny fanjakana izany.
Elle Freem, mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo, nahita ny fomba fandehan'ny fanentanana voalamina tao Tacloban:
Ny faritra Visayas Atsinanana no mety ho voalohany indrindra raha faharetana, vonona hitsangana ny olona ary tsy manoloana ny fahasarotana ara-pitaovana sy ara-tsaina amam-panahy nateraky ny tafio-drivotra mahery vaika ihany, fa koa manoloana ny tsy fihetsehan'ny governemanta izay manararaotra ny fanampiana atobaka. Olona an'aliny no nizotra ho any amin'ny oniversiten'i Visayas atsinanana mba haneho ny vinavinany mikasika ny fomba hanavaozana ny tranon'izy ireo sy ny faritra. Milamina tsara ny fiarahamonina eto ary manana drafitra mikasika ny fomba hahatongavana amin'izany, saingy hihaino ve ny governemanta?